Hutsanana hwepedyo panguva yekuzvitakura | Bezzia
Maria Jose Roldan | 30/07/2021 22:56 | Mimba
Kunyangwe kunetsekana kwevakadzi vazhinji vane nhumbu, hwema hwakasimba hwemuviri, kunyanya munzvimbo dzepedyo, zvakajairika mukati memwedzi yekubata. Kunetseka kwakadai kunopihwa nekutya kana kutya kuti kunhuwirira uku kunokonzerwa nehutachiona munzvimbo yemukadzi.
Ndosaka zvichikosha kwazvo kuteedzana nhevedzano yemanongedzo kana kurairwa zvine hukama nehukama hwepedyo panguva yese yepamuviri.
1 Kuwedzera kubuda kwemukadzi panguva yekuzvitakura
2 Utsanana hwepedyo hunofanira kuve nepamuviri
3 Zvekuita kana paine fungidziro yakakomba yehutachiona hutachiona
Kuwedzera kubuda kwemukadzi panguva yekuzvitakura
Zvakajairika kuti mukati memwedzi iyo kubata kunotora, kubuda kwemukadzi kwemukadzi kunowedzera zvakanyanya. Izvi zvinokonzerwa nebasa guru rehomoni rinoitika mukati memuviri wemukadzi. Dambudziko riri nekuda kwekuti vakadzi vazhinji vane nhumbu vanotenda zvisirizvo kuti hwema hwakasimba hwemuviri hwakakonzerwa nehutachiona hwemukadzi. Izvi zvinogona kutungamira kuzvikanganiso zviviri zvakakura zvevakadzi:
Iwe unosvika pakuzvishandira iwe-mushonga kurapa hutachiona hwevakadzi. Izvo zvakakosha kuti uone chiremba mune chiitiko chekuti pane fungidziro yekuti une hutachiwana hwepachikadzi.
Kupfuura kana uchichenesa nzvimbo yemukadzi nokudaro zvichikonzera kutsamwa kukuru munzvimbo yepedyo.
Utsanana hwepedyo hunofanira kuve nepamuviri
Kana zvasvika pakushambidza nzvimbo, hazvidiwe kushandisa zvigadzirwa zvacho. Ingoisa mvura shoma uye chengeta nyinyo yakachena chose.
Usapfuure paunenge uchigeza munzvimbo yakadai. Zvinokurudzirwa kuzviita kamwe chete pazuva kudzivirira njodzi yekutapukirwa.
Iwe unofanirwa kuomesa nzvimbo yacho chaizvo, kunyanya chikamu cheguruva uye zvese zvakapetwa. Dzimwe nguva kuunganidzwa kwehunyoro kunokonzera kuti fungi dzakasiyana siyana dzioneke munzvimbo yechikadzi.
Mushure mekuita bhizinesi, zvakakosha kuchenesa nzvimbo zvakanaka kubva kumberi kuenda kumashure.
Muchiitiko chekuti kubuda kwemukadzi kwakakosha, vakadzi vanogona kusarudza kupfeka donje remapanty liners.
Zvekuita kana paine fungidziro yakakomba yehutachiona hutachiona
Zviratidzo zvehutachiona hwechikadzi zviri pachena uye zviri pachena: kuvaviwa kwakasimba kana kubaya muhutsi, kuburitsa kwakanyanya mukati memukadzi, hwema hwakasimba uye kurwadziwa kana uchiita weti. Kana mukadzi ane nhumbu aine fungidziro dzakakomba dzekuti chaari kurwara nacho hutachiona hwemukadzi, anofanirwa kuenda kuna chiremba nekukurumidza kuti aite tsika.
Muchiitiko chekuti kuongororwa kuri kwakanaka uye mukadzi ane nhumbu anotambura hutachiona, anofanira kutanga kurapwa uye shandisa nhevedzano yezvimwe zvigadzirwa kushambidza nzvimbo yekubereka.
Muchidimbu, zvakajairika kuvhiringidza yakasimba hwema hwemuviri hwakajairwa nepamuviri pamwe nekutambura chirwere chemukadzi. Hazvikurudzirwe zvachose kuzvirapa uye enda kuna chiremba kana paine kusahadzika kwakanyanya. Rangarira kuti panguva yepamuviri zvakajairika uye zvakajairika kuti kuve nekuwedzera kukuru mukubuda kwemukadzi uye semhedzisiro, kune kuwedzera kwekunhuhwirira mumuviri wese, kunyanya munzvimbo yepedyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Vanamai » Mimba » Hutsanana hwepedyo panguva yekuzvitakura
Maitiro ekuchenesa uye disinfecti iyo firiji nezvakagadzirwa zvigadzirwa
Pantone, iyo yekuzivisa mavara system iwe yaunofanirwa kuziva